दसैं अफर ३ लाख पर्ने मोटरसाइकल अब १.५ लाखमै : साथै हेर्नुहोस यी हुन् २ लाख पनि नपर्ने मोटरसाइकलहरु ! – Enepali Samchar
दसैं अफर ३ लाख पर्ने मोटरसाइकल अब १.५ लाखमै : साथै हेर्नुहोस यी हुन् २ लाख पनि नपर्ने मोटरसाइकलहरु !
October 11, 2020 November 1, 2020 adminLeaveaComment on दसैं अफर ३ लाख पर्ने मोटरसाइकल अब १.५ लाखमै : साथै हेर्नुहोस यी हुन् २ लाख पनि नपर्ने मोटरसाइकलहरु !
ललितपुर – ललितपुरको हरिसिद्धि बस्दै आउनुभएका रमेश न्यौपानेले गत साता मोटरसाइकल किन्नुभयो । सातदोबाटोमा कस्मेटिक्स पसल रहेका उहाँ पहिले दैनिक सार्वजनिक यातायातमा आउने जाने गर्नुभएको थियो । अहिले को,रो,नाका त्रासका कारण आफ्नै साधनमा हिँड्ने उहाँको सोच छ । सामान्य अवस्थाभन्दा पनि विपद्का समयमा आफ्नो सवारीसाधन नहुँदा समस्या हुने उहाँको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या भएकैले अहिले नै किनेर सिक्दै छु ।”
को,भिड–१९ त्रा,सका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा उहाँ घरमै बस्नुभयो र मोटरसाइकल सिक्नुभयो । सरकारले असार १ देखि निजी सवारीसाधन खुलाए पनि त्यतिबेला आफूसँग सवारीसाधन नभएकै कारण उहाँ पसल खोल्न सक्नुभएको थियो । त्यसपछि कति दिन हिँडेरै गएको उहाँले बताउनुभयो । दैनिक पाँच किमी हिँडेर जाने र आउने गर्दा गाह्रो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले उहाँ सार्वजनिक बसबाटै आवतजावत गर्नुहुन्छ । अहिले एकातिर सार्वजनिक सवारीसाधन कम चलेका छन् भने अर्कातिर सङ्क्रमणको जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बिहान साँझमा त अझै बसमा पनि भीडभाड हुने गर्छ ।” विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको को,भि,ड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायात कहिले बन्द त कहिले जोर÷बिजोरमा सञ्चालन गर्दा निजी सवारीसाधनप्रति नागरिकको आकर्षण बढिरहेको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार साउन १ देखि बिहीबारसम्म तीन हजार ६४१ दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन बिक्री भएको छ । असार महिनामा छ हजार ५६६ बिक्री भएको थियो । लामो समयसम्म बन्दाबन्दी भए पनि मोटरसाइकल र स्कुटरको खरिद बिक्री गत वर्षभन्दा कम नभएको कार्यालयका प्रमुख दीपककुमार पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयमा नयाँ खरिद मात्रै नभएर नामसारीका लागि पनि धेरै सेवाग्राही आउने गरेका छन् । ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’ व्यक्ति–व्यक्तिको किनबेच भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “असारमा कार्यालय खुलेदेखि नै सेवाग्राहीको भीड छ ।”
सेवाग्राहीको एकै पटक भीडभाड हुने भएकाले कार्यालयले भीड कम गर्न जोर गते जोर नम्बरका र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारीसाधनको दर्ता गरिरहेको छ । उपत्यकाका अरु यातायात कार्यालयले टोकनमार्फत सीमित व्यक्ति मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुने वातावरण बनाएका छन् । सरकारले कार्यालय खुलाउने निर्णय गरेपछि उपत्यकामा रहेका सबै यातायात कार्यालयले सेवाग्राही भीड कम गरेर सेवा सञ्चालनको निर्णय गरेका थिए । यो कार्यालयले अहिले नयाँ दर्ता र नामसारी दुवैका लागि जोर÷बिजोर लागू गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ दर्ता तोकिएका दिनमा गरेर नामसारी जुन दिन आउँदा पनि सकेसम्म फर्काइएको छैन ।”
तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म बन्दाबन्दी हुँदासमेत गत वर्षभन्दा छ हजार कम मात्रै दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । गत आवमा ७३ हजार ३३१ सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । आव २०७५÷७६ मा ७९ हजार ३०० र आव २०७४÷७५ मा एक लाख पाँच हजार ८६३ सवारीसाधन दर्ता भएका थिए ।
नयाँ खरिद र नामसारी बढिरहँदा कार्यालयमा जम्मा हुने राजस्व गत वर्षभन्दा बढी हुने देखिएको छ । गत बर्ष साउनमा रु ११ करोड २८ लाख छ हजार १३१ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । बिहीबारसम्ममा रु १२ करोड ७५ लाख १२ हजार ४६६ सङ्कलन भइसकेको छ । गत वर्ष असारमा रु १२ करोड ९९ लाख ८७ हजार ९६३ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने यो असारमा रु छ करोड ७४ लाख २१ हजार ३३८ सङ्कलन भएको थियो ।
News Source: SidhaOnlinePatra (https://sidhaonlinepatra. com/archives/19960)
श्रीमान वितेको दुई महिनामै फेरी अर्को बज्रपात… रुँदारुँदै सकियो अन्तरवार्ता (भिडियो हेर्नुस्)
कोरोना नदेखिएको दाबी गर्ने उत्तर कोरियाले चोर्न खोज्यो फाइजर खोपको डाटा
फेरि अर्को सबैलाई ५० कित्ता पर्ने आइपियो निस्कासन हुने (मिति सहित )